Myanmar Host Zone is under Central Host Myanmar Co., Ltd.
Check See More See More See More
Domain Min. Years Register
.com 1 16000 ks 16000 ks
.net 1 20000 ks 20000 ks
.org 1 19000 ks 19000 ks
.biz 1 19000 ks 19000 ks
.info 1 6000 ks 21000 ks
Click Here to Domain Check
Note: Traffic များသော Customer Site များအတွက်မူ သီးသန့် Virtual Private Server (with Load Balancer & Auto Scaling) ဖြင့် အသုံးပြု ရေးဆွဲပေးပါသည်။
Email with own domain service
Free email တွေ အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ...
သင့်အနေနဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း customer များကြားမှာ ကိုယ်ပိုင် Domain Name နဲ့ email ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် မိမိဟာ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းမှ ဆိုပြီး ယုံကြည်မှု ပိုရစေပြီး အသိအမှတ်ပြုစေပါတယ်။
website လဲ ရေးထားတယ်ဆိုရင် domain ခေါ်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို မမောမပန်း ရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘဲ marketing လုပ်ပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်နော်။
ဒါကြောင့် ဖရီး သုံးနေကြတဲ့ Social media တွေ ဘယ်လိုပဲ အားကောင်းကောင်း ကိုယ်ပိုင် Domain Name နဲ့ အီးမေးလ် သုံးမယ်၊ website လဲ ရှိထားမယ်ဆိုကတော့ တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုတင့်တယ် သာလွန်စေမှာပါ ..
အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ အကောင့် ၅၀ အထက် ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် လိုဂိုဖြင့် သီးသန့် မေးလ်ဆာဗာ ( Dedicated Server) ကိုလည်း လိုအပ်သလို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ အီးမေးလ်အကောင့်တွေကို နာမည်ပြောင်းလက်ဆင့်ကမ်းလို့ ရခြင်းပါ။ ဥပမာ - အရင် အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော မောင်မောင်၏ အီးမေးလ် mgmg@mygroup.org အကောင့်ကို ယခုတာဝန်ယူမည့် ကိုကိုအမည်သို့ ပြောင်းပေးခြင်းပါ၊ ထို့ကြောင့် ယခင် ပြုလုပ်ချိတ်ဆက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများကို တစ်ဆက်တည်း သိရှိနားလည်ကာ အဆင်ပြေချောမွေ့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Central Computer မှ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးမြား၊ Company မြား၊ ဟိုတယျမြား၊ Online Shop မြား၊ အဖှဲ့အစညျးမြားအတှကျ မိမိတို့ လိုအပျခကျြအလိုကျ Website မြားကို ရေးဆှဲပေးလကျြ ရှိပါသညျ။
Online University မြား၊ Private School မြား၊ ကိုယျပိုငျ သငျတနျးကြောငျးမြားအတှကျ Web Application မြား
ကြှနျမတို့ Supporting လုပျပေးမယျ့ System ကတော့ တဈကမ်ဘာလုံး online သငျကွားရေး site တှအေနကျ 154,000 sites တှမှော သုံးနပွေီး နိုငျငံပေါငျး ၂၃၈ နိုငျငံမှာ အသုံးပွုနသေညျ့ Moodle - Online Learning Management System ဖွဈပါတယျ။ enroll လုပျပွီး သငျယူနခေဲ့ကွတဲ့ ‌ကြောငျးသားပေါငျး သနျး၂၀၀ လောကျ ရှိနပေါတယျ။ နိုငျငံတကာ စံခြိနျစံညှနျးမှီတဲ့ Online Learning Management System ကို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားစှာ ရရှိစမှော ဖွဈပါတယျ။
Central မှ ရေးဆွဲခဲ့သော website အချို့ပါ
Central Computer, Room (B1), Corner of 73rd st & 41st street, Mandalay University Tike Tan, Mahar Aung Myay Township, Mandalay.
Tel : 09-444008562, 09-456805750, 09-680730991
Fax : 02-2832761
Email : contact@centralmdy.net